Mayelana NATHI - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Joint Technology Co., Ltd.
ngokukhethekile R & D futhi yokukhiqiza isikhunta ukucutshungulwa futhi imishini izingxenye ukucutshungulwa imishini, thina athuthukiswe eliphezulu futhi zobuchwepheshe ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza, service ithimba kanye nokuphathwa uhlelo, futhi imikhiqizo enwetshiwe ezingaphezu kuka-11 uchungechunge kusuka imishini yokugaya, ukuze umshini isikhungo, mechanical ingalo, ezenzekelayo. Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nedumela lomkhiqizo elihlukile, imikhiqizo yethu ithengiswa emadolobheni athuthukile angaphezu kwe-40 kulo lonke elaseChina, nakwamanye amazwe angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele e-Asia, eYurophu naseMelika.
Inkampani yethu ithatha umkhiqizo osezingeni eliphakeme njenge-orientation, imibono ye-R & D ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo yekhwalithi efaneleke kakhulu, yaba ngumkhiqizi wethuluzi lomshini onomugqa ophelele womkhiqizo wesikhunta nezingxenye zethuluzi lomshini wokulungisa kanye namandla okwenziwe okwenziwe eChina .
● Inzuzo yekhwalithi: inqubo yokulawula ikhwalithi eyenziwe ngokulinganayo nenemininingwane nokusebenza kwendlela yokusebenza, ubuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphakeme, isoftware yokuthola izinga eliphezulu kanye ne-Hardware - ukuqinisekisa ukutholakala okuzinzile kwemikhiqizo emihle kakhulu.
● Izinzuzo zokucwaninga nentuthuko: ngaphezu kweminyaka engama-20 yokunamathela ocwaningweni olunzulu nobuchwepheshe bezulu - kwakha isici esenza ukusebenza kwemishini okujwayelekile kube ngcono, kwenziwe ngezifiso imishini ngokushesha nangokunembile, futhi kunikeze imishini nokusetshenziswa kwezixazululo eziphelele.
I-patent yokusungula, i-utility model patent, inqwaba yamalungelo obunikazi be-software
● I-ERP, i-CRM nolunye uhlelo oluphelele lokuphathwa kolwazi - ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwebhizinisi kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo.
Nikeza amakhasimende ngemikhiqizo eyenziwe ngezifiso
Nikeza amakhasimende ngoxhaso lobuchwepheshe besicelo semikhiqizo ye-CNC, kufaka phakathi ukufakazelwa kwemikhiqizo, ukucubungula inqubo yokuhlela, ukuklanywa kwemishini nokukhiqizwa.
unikeze amakhasimende isikhunta noma izingxenye zokucubungula uhlelo lokutshala yonke imishini yezitshalo, kufaka phakathi izingxenye zokucubungula uhlelo lokushaya, ukufana kwemishini.
Nikeza amakhasimende izixazululo ezihlanganisiwe zemigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo, kufaka phakathi i-automation yemishini, ukulayisha nokulayisha ezishintshayo, kanye nemishini yokudlulisa ebonakalayo.